काेराेना प्रभाव : सुनकाे भाउमा नयाँ कीर्तिमान , आजमात्रै तोलामा १८ सय बढ्यो !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
काेराेना प्रभाव : सुनकाे भाउमा नयाँ कीर्तिमान , आजमात्रै तोलामा १८ सय बढ्यो !
काठमाण्डाै – अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा सुनको भाउ झन् महँगो हुँदै गएको छ । सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा १८ सय रुपैयाँ बढेर तोलाको ८२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आर्थिक मन्दीतिर गइरहेकाले लगानीकर्ता सुनतिर आकर्षित भएका हुन् ।
बिहीबार फेरि तोलामा दुई सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा एक हजार आठ सय रुपैयाँले बढेर अहिलेसम्मकै महँगो तोलाको ८२ हजार पाँच रुपैयाँ पुगेकाे हो ।
चाँदी तोलामा १० रुपैयाँ बढेर तोलाको आठ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य, आज कति?
बढ्यो सुनको मूल्य,आज कति ?
सुनको मुल्य एकैदिन तोलामा २ हजार घट्यो
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, आज कति ?
ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, आज कति ?